टोखामा भएको इन्जिनियर दम्पत्तीको मृत्युको कारण खुल्यो ! – Khabaarpati
January 10, 2021 January 10, 2021 goodmamLeaveaComment on टोखामा भएको इन्जिनियर दम्पत्तीको मृत्युको कारण खुल्यो !
काठमाडौं । काठमाडौको टोखामा शुक्रवार राति भएको घटनाको कारण खुलेको छ । भर्खरै अमेरिकावाट नेपाल फर्किएका एक इन्जिनियर दम्पत्तीको रहस्यम मृत्युको कारणवारे प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरुको शव शुक्रवार राती स्थानियले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । काठमाडौंको टोखास्थित ग्रिन भिल्ला कोलोनीमा दम्पतीको शव फेला परेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
ग्रिन भिलामा बस्ने ३३ वर्षीया सुदिक्षा गिरी र उमेश केसी रहस्यमय अवस्थामा फेला परेका थिए । श्रीमतीले श्रीमानको ज्या’न लि’ए’र आफुले पनि देह त्याग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अमेरिका बस्दै आएका श्रीमान् केसी नेपाल आएपछि दुवै जनाबीच केही समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । शुक्रवार पनि उनीहरुबीच विवाद भएको र घटनाले ठूलो रुप लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
कोठाभित्र मृ’त अवस्थामा प’ल्टि’रहेको अवस्थामा उमेशको शव प्रहरीले बरामद गरेको थियो । पत्नी सुदिक्षाचाहिँ झु’ण्डि’एको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उमेश र सुदिक्षा इन्जिनिर भएको बताइएको छ ।
घटनास्थलमा र’ग’त लागेका अवस्थामा सिलौटो फेला परेको छ । उमेशको परिवार अमेरिका बस्दै आएका छन् ।
उनीहरु टोखाको एक हाउजिङमा भाडामा बस्दै आएका थिए। उमेश ३ महिना अघि मात्रै अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए। भने अबको ५ दिने अर्थात १४ जनवरीमा अमेरिका उड्ने तयारी गरिरहेका थिए।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **